Ndịàmà Jehova Hà So Na-ekwu Ka E Nwee Ọchịchị Ndị Juu? | Ajụjụ Ndị Mmadụ Na-ajụkarị
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Arabic Armenian Armenian (West) Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bengali Bicol Bislama Boulou Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chuvash Croatian Czech Dangme Danish Digor Drehu Dutch Edo Efik English Esan Estonian Ewe Fante Faroese Finnish French Ga Galician German Greek Hausa Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Indonesian Isoko Italian Itsekiri Japanese Kabiye Kabyle Kannada Kinyarwanda Kirundi Kisi Kongo Korean Krio Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Low German Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mam Mapudungun Mauritian Creole Maya Mende Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Huasteca) Ndebele Ngangela Norwegian Nzema Oromo Ossetian Persian Polish Portuguese Punjabi Rarotongan Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Tigrinya Tiv Tlapanec Tok Pisin Totonac Tsonga Turkish Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urhobo Valencian Venda Vezo Vietnamese Wallisian Welsh Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Ndịàmà Jehova Hà So Na-ekwu Ka E Nwee Ọchịchị Ndị Juu?
Mba, ha anaghị ekwu ụdị ihe ahụ. Ndịàmà Jehova bụ Ndị Kraịst. Ihe niile ha kweere sikwa na n’Akwụkwọ Nsọ. Ọ bụ eziokwu na okpukpe ụfọdụ na-ekwu na Akwụkwọ Nsọ kwuru na ndị Juu niile ga-emecha biri na Palestaịn, jiri aka ha na-achị onwe ha, ma Ndịàmà Jehova anaghị ekwu ụdị ihe ahụ. O nweghị ebe ha gụtara ụdị ihe ahụ n’Akwụkwọ Nsọ. Nke bụ́ eziokwu bụ na Akwụkwọ Nsọ ekwughị na o nwere obodo ka ibe ya mma ma ọ bụ nke ọchịchị ha ka nke ndị ọzọ mma. Akwụkwọ Ndịàmà Jehova kacha ebipụta, nke a na-akpọ Ụlọ Nche, kwuru hoo haa na o nweghị ebe Akwụkwọ Nsọ kwuru na ndị Juu niile ga-aga biri na Palestaịn na-achị onwe ha.
Otu akwụkwọ a na-akpọ Encyclopædia Britannica kwuru na ihe ahụ ndị Juu na-eme bụ ‘ịgbalị ka ndị obodo ha niile gaa biri na Palestaịn na-achị onwe ha.’ Ọ bụ ndị okpukpe na ndị ọchịchị ndị Juu gbakọrọ aka na-eme ihe a. Ndị Jehova anaghị akwado ihe a ndị Juu na-eme. O nwetụdịghị otú aka ha si dịrị na ya.
Ihe Ndịàmà Jehova na-eme bụ ife Chineke. Ha anaghị etinye aka n’ọchịchị obodo, ọ sọgodị ya ya bụrụ nke ndị Juu. A ma Ndịàmà Jehova ama na ha anaghị etinye aka n’ọchịchị. O nweekwala obodo ndị e ji maka ya mekpọọ Ndịàmà Jehova ọnụ. Ihe anyị ma bụ na ọ bụ naanị Alaeze Chineke ga-eme ka udo dịrị n’ụwa a. O nweghị ọchịchị mmadụ ga-emeli ya.
A ma Ndịàmà Jehova ama n’ụwa niile na ha na-erubere ndị ọchịchị isi. Ha anaghị agba ọchịchị mgba okpuru ma ọ bụ na-alụso ha ọgụ.